YEYINTNGE(CANADA): Saturday, December 15
burmese army stupid rude major get hiding camera
source => facebook
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 12/15/20120အကြံပြုခြင်း
ဓမ္မစက်ဖြင့် ပြီးလျှင် အာဏာစက်ဖြင့် ပြုလုပ်ရန် အသံတွေ ကြားနေတယ်
အရှင်ဘုရား တပည့်တော်တို့သည် မိုက်မဲသည့်အလျောက်၊ တွေဝေသည့်အလျောက်၊
မလိမ္မာသည့်အလျောက် သံဃာတော်ကို အစိုးမရခြင်းတည်းဟူသော အကြောင်းကြောင့်
အရှင်ဘုရား ထိုတပည့်တော်တိုးအား သံဃာတော်သည် နောင်အခါ
စောင့်စည်းခြင်းငှာ အပြစ်ကို အပြစ်အားဖြင့် ရှုမြင်၍ ကရုဏာရှေ့ထား
ဟုဆရာတော် ဦးဝီရသူက ချိုးပေးဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုယ်စား သမ္မတရုံးဝန်ကြီး
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးလှထွန်းက သံဃာတော်များကို တောင်းပန်ကြောင်း
ထပ်မံလျှောက်ထားခဲ့စဉ်က ဖြစ်သည် ။။။
ဤသို့ ဆရာတော် ဦးဝီရသူက တောင်းပန်စာကို ချိုးပေးတိုင်ပေးပြီး
၀န်ကြီးဦးလှထွန်းမှာ အစိုးရကိုယ်စား တာဝန်ခံ လိုက်ဆိုကာ တောင်းပန်သည်ဟု
ဆိုတော့ သာဓု သာဓု သာဓု သုံးကြိမ်ခေါ်လိုက်ရပါသည် ။
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွင် လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြကြရာ နည်းလမ်းပေါင်းများစွာကို
ပြည်သူတို့ က အသုံးပြုသလို အစိုးရကလည်း နည်းမျိုးစုံဖြင့် ကူညီခြင်း ၊
တားဆီးခြင်း စသော နည်းမျိုးကို အသုံးပြုတတ်ကြသည် ။
တကိုယ်တော်ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ပြခြင်းကို မည်သူမျှ လိုက်လံတားမြစ်ဖမ်းဆီးခြင်းမည်း
မရှိသလို လူငါးဦးမကျော်လျှင် ဖမ်းဆီးတားမြစ်ခြင်းလည်း
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများမှာ မကျင့်သုံးကြပေ ။ ၄င်းစံနုံးများကို
မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရများက အတူယူလေးစား တန်ဖိုးထားရန်လိုသည် ။
သာမန်အားဖြင့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများတွင် လူစုလူဝေးဖြင့်
ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ရန် မြို့ လည်ရပ်ကွက်များတွင် နေရာသတ်မှတ်ထားပေးသည် ။
အထူးသဖြင့် သမ္မတအ်ိမ်တော်အနီး ပါလီမန်အိမ်တော်အနီး အစိုးရရုံးနှင့်
နီးကပ်သော နေရာများတွင် သတ်မှတ်ပေးထားတတ်ပါသည် ။
ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ကြမည်ဆိုသောအခါ ရဲထံမှ ပါမစ်ခွင့်ယူပြီး အသံချဲ့ စက်
မသုံးလျှင် ငွေကြေး မပေးရခြင်း နှင့် အချိန်ကာလ နေ့ ရက်တို့ ကို
လက်မှတ်ထိုးကာ နယ်မြေခံ ရဲထံတွင် လူကိုယ်တိုင်သွား၍ဖြစ်စေ အင်တာနတ်ဖြင့်
အီးမေးရေးပြီး လျှောက်သည်ဖြစ်စေ လျှောက်ထားသည်များကို တင်သွင်းပေးပို့
့နိုင်သည် ။ ၄င်းလျှောက်ထားသည်များကို ချက်ချင်းပင် မဆိုင်းမတွ
ခွင့်ပြုချက်ပေးကာ လိုအပ်သည်များကို စောင့်ရှောက်နိုင်ရန်အတွက်
ရဲများတွင် အစီအစဉ်များ ပြုလုပ်ချိန် ရရှိသွားတတ်ပါသည် ။
ဆန္ဒပြနေသောလူအုပ်စုမှာ ကြေညာချက်များကို ဖြန့် ဝေခြင်း ၊
လူထုဟောပြောပွဲများကို ဟောပြောခြင်းများ ၊ သရုပ်ဆောင်ပြသခြင်းများကို
ပြုလုပ်ချိန်ခွင့်ပြုမိန့် ပါမစ်ရထားသည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိကြသည်
။ ကြေညာချက်များကို ပါလီမန်သို့ ၎င်း၊ သမ္မတသို့ ၎င်း ၊ ၀န်ကြီးချုပ်ထံသို
့၎င်း ၊ သို တည်းမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာသံရုံးများသို့ပေးပို့လိုလျှင်
တာဝန်ကျ ရဲလုံခြုံရေးမှ ရဲကားဖြင့် ဆန္ဒပြသူများ၏ ကိုယ်စားလှယ်
-၃-ယောက်ခန့် ကို လိုက်လံပို့ ဆောင်ပေးတတ်ပါသည် ။ ၄င်းကိုယ်စားလှယ်များမှ
ကြေညာချက်များကို ပေးပို့ ပြီးပြန်လာသည့်အခါမှ ဆန္ဒပြသည့် လူအုပ်စုမှာ
အချိန်ကာလအတိအကျကို လေးစားစွာဖြင့် ခွင့်ပြုချက်နေရာမှ ထွက်ခွါရသည် ။
ဤသည်မှာ ကျွန်တောတို့ပြုလုပ်ခဲ့ သော - တွေ့ ကြုံဖူးသော
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများ၏ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်သည့် အခန်းအနားအကြောင်းအရာဖြစ်သည် ။
အကယ်၍ ဤသို့ သော အချက်အလက်များကို မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရသည် သေသေချာချာ
သိထားသည်ဆိုပါက မည်သည့်အကြမ်းဖက် ပြသနာများနှင့် မည်သည့် အဓိကရုဏ်းများ
၀န်းနည်းဘွယ်ရာ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းငှာ လုံးဝပေါ်ပေါက်မည် မဟုတ်ချေ ။
သို့ အတူ ဆန္ဒပြနေသော လူအုပ်စုများမှာ
ညအိပ်ဆန္ဒပြနေသည်ဆိုလျှင်လည်း ခွင့်ပြုချက်ပေးထားသော ဆန္ဒပြနေရာမှာ
တသက်လုံးညအိပ်ဆန္ဒပြခွင့် ရရှိကြသည် ။ ဆန္ဒပြခွင့်မဟုတ်သော
နေရာများတွင်မူ ညအိပ်ဆန္ဒပြခွင့်လည်းမရှိသလို နေ့ လည်းဆန္ဒပြခွင့် မရှိ ။
အကယ်၍ ပုဒ်မ္မ(၁၄၄ ) ထုတ်ပြန်ထားသော နယ်မြေတွင်ဆိုလျှင်လည်း
လုံးဝလူစုလူဝေးဖြင့် ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ခွင့်မပြုလုပ်ရချေ ။ တချိန်တည်းမှာပင်
ပုဒ်မ္မ ( ၁၄၄ ) ၏ အနှစ်သာရကိုလည်း ပြည်သူတရပ်လုံးသိရှိအောင်
ပညာပေးသင်တန်းများကို သင်ကြားပေးရန် အထူးလိုအပ်နေပါပြီ ။ ပြည်သူများ
သိရှိရန်လိုအပ်သကဲ့ သို့ပဋိပက္ခ အဓိကရုဏ်းများကို နှိမ်နှင်းရသော
လုံခြုံရေးရဲများကလည်း ပုဒ်မ္မ ( ၁၄၄ ) ၏ အခမ်းကဏ္ဍ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို
အနှစ်သာရရှိရှိ သိထားလေ့လာထားရန် လိုအပ်နေပါပြီ ။ ရဲလုပ်နေပြီး
ဥပဒေအချက်အလက်များကို မသိဘဲ တောင်းစားလဘ်စား မည့် -အချက်ကိုသာ သိသော
ပုလိပ်ညဉ် ရှိနေသည့် စိတ်မျိုးကို ယခုအချိန်မှာ
ဖျောက်ဖျက်ပေးရန်လိုနေပါပြီ ။ ပြုလုပ်နေသူများရှိလျှင်လည်း
ဖမ်းဆီးအရေးယူရမည့် အချိန်ဖြစ်သည် ။ ယခုအချိန်သည် တရားသူကြီးက
တရားခံဖြစ်ရမည့် အချိန် ၊ ရဲက တရားခံဖြစ်ရမည့် -၂၁-ရာစု -အချိန် ဖြစ်သည်
။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများသည် လူသားတို့ ၏ လူ့ အခွင့်အရေးများနှင့် လူ
့အကျင့်စရိုက်များကို အကောင်းဆုံးပြုပြင်ထိမ်းသိမ်း ပဲ့ ပြင်တတ်သော
စည်းကမ်းချက်များကို ချမှတ်ထားတတ်ရာ သမ္မတသည်၎င်း ၊ ၀န်ကြီးချုပ်သည်၎င်း ၊
တရားသူကြီးသည်၎င်း တရားခွင်တွင် တရားခံလုံးလုံးဖြစ်သွားသူများ
ကျွန်တော်တို့ မှာ မြန်မာနိုင်ငံ ရွေ့ နေပါသည်ဟု ပြောနေသော
ဝေါဟာရကို လက်မခံချင်ဘဲ အောင့်အီးကာ လက်ခံနေရသည် ။ ရွေ့ လျှင် ရွေ့ 
သည့်အနေအထားမှာ ခလုပ်ကန်သင်းများ အဖုအထစ်များ မရှိစေ မတိုက်မိစေဘဲ
ဖြောင့်ဖြူသာယာစွာဖြင့် လမ်းခရီးချောမွေ့ ကာ ရွေ့ စေရမည်ဖြစ်သည် ။ ခုတော့
ရွေ့ နေပါသည်ဟု တချို့ က ပြောနေချိန် မည်သည့်အတွက်ကြောင့်
အဖုအထစ်ပြသနာများကို ကြားရသနည်း ဆန်းစစ်တော့ ဥပဒေ၏အထက်မှာ လူတန်းစားတချို့
့ ရှိနေသည်ကိုလည်း မမြင်ရသော်တောင်မှ မှန်းဆကြည့်၍ သိသာနိုင်ပါပြီ ။
ကျွန်တော်တို့ မှာ စင်စစ်အားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကို တလိမ့်လ်ိမ့် ရွေ့
့စေချင်၍ ဘ၀ကို အနစ်နာခံကာ နိုင်ငံရေးလောကမှာ ကူသန်းကျော်ဖြတ်
နေကြသူများဖြစ်သည် ။ ထို့ ကြောင့် ယခုဖြစ်နေသော
အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခြင်းများကို လက်မခံ ၊ ဖမ်းဆီးနေခြင်းများကို လုံးဝ
မနှစ်သက် ။ စောစောကတင်ပြသလို ပြည်သူများကလည်း ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ခွင့်ကို
သိရှိသလို အစိုးရကလည်း ခွင့်ပြုမည်ဆိုလျှင် မည်သူမျှ ထိခိုက်နာကျင်ကြမည်
မဟုတ်သည်မှာ သေချာလှပါသည် ။
ခုတော့ ဆရာတော်တွေကို အစိုးရကိုယ်စား ၀န်ကြီးဦးလှထွန်းတို့ က
တောင်းပန်ဝန်ချ သည်ဆိုတော့ ကြားရသူမြင်ရသူ အပေါင်းတို့ မှာ
စစ်ယူနီဖေါင်းချွတ်အစိုးရ၏ ဆင်ခြင်တုံတရားများကို လက်ခံသဘောကျမိပါတော့သည်
။ ၄င်းကဲ့ သို့ သာ ဖြစ်ရချေမည် မဟုတ်ပါလား ။ ဗုဒ္ဒ၏ ဆိုဆုံးမကို
ခံယူထားသော ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်များအဖို့ဆယ်ပါးသီလကို ခါးဝတ်ပုဆိုး
မြွေစွယ်မကျိုး ရှိထားရမည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည် ။ ၄င်းမှန်ကန်သောအချက်ကို
အစိုးရမှ စံနမူနာပြသလိုက်ခြင်းမှာ ချီးကြူးလေးစားစရာဖြစ်ပါတော့သည် ။
ခုတော့ ဓမ္မစက်ဖြင့် အရာခပ်သိမ်းတို့ မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၌
ငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းလိုက်ပြီဖြစ်၍ အေးချမ်းသာယာ သွားပြီဖြစ်ကြောင်း
ပြော၍ ရပါတော့မည် ။ ဓမ္မစက်ဖြင့် နိုင်ငံတည်ငြိမ်သွားပြီဆိုတော့
ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်များ၏ တရားတော်အတိုင်း တယောက်ကိုတယောက်
နားလည်ခွင့်ပြုကြပြီးပြီဆိုတော့ တခုသာကျန်ပါတော့သည် ။
၄င်းမှာ အာဏာစက်သာကျန်ပါတော့သည် ။ ဓမ္မစက်က ခွင့်လွှတ်ပြီဆိုသော်လည်း
အာဏာစက်က ရှိနေသေးသည်မို့၎င်းအာဏာစက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် ကျန်နေသည် ။
ယခုလက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း၏ အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲမှုတွင်
အာဏာစက်ဖြင့် ဥပဒေကဲ့ သို့ တည်သောအမိန့် ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်လိုပါသေးသည် ။
ယခုအကြမ်းဖက် မီးလောင်ဗုံးဖြင့် ဖြိုခွဲခြင်းသည် သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏
ခိုင်းစေသော အမိန့် မဟုတ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့နားလည်နေသည် ။
တနေရာရာမှာ တစုံတယောက်ယောက်က မှားယွင်းနေသော အမိန်
့ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေပေလိမ့်မည် ။ မည်သို့ ပင်ဆိုစေ မုံရွာ ရဲမှူးကြီး
ဦးတင်ထွန်းသည် မီးလောင်ဗုံးကို လိုသည်ထက်ပိုသုံးစွဲခြင်းနှင့် ပုဒ်မ (
၁၄၄ ) ၏ အမိန့် ပါ အနှစ်သာရ ကို ရဲမှူးကြီး တယောက်လုပ်နေပြီး
မသိနားမလည်လဲ အပြစ်မဲ့ရဟန်းသံင်္ဃာများအား လူမဆန်စွာ အိပ်စက်
ကျိန်းနေချိန်မှာ ရက်ရက်စက်စက် ပြုလုပ်သူဖြစ်သည် ။ သူ့ အား အမှုဖွင့်ရန်
ဆေးရုံရှိ ရဟန်းသံင်္ဃာတပါးပါး သို့ မဟုတ် လူတယောက်ယောက်ကို
ခွင့်ပြုရန်လိုသည် ။ သို့ မှသာ လက်ပံတောင်းတောင်စီမံကိန်းလို နောင်မည်သို
့မျှ မီးလောင်ဗုံးမျိုး သို့ မဟုတ် မည်သည့် အန္တရယ်ပြုမည့် ဗုံးများ
မသုံးကြတော့သလို အဓိကရုဏ်းများကို နှိမ်နှင်းရာ၌လည်း
ဥပဒေအချက်အလက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ကြမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည် ။ ထို့ ကြောင့်
ဓမ္မစက်ပြီးသွားလျှင် အာဏာစက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် လိုနေပါသေးကြောင်း။။။။။။။။။။။။။
အံ့ သြ ကုန်နိုင်ဘွယ်ပါ တကား....
လက်ပံတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်း၏ နောက်ကွယ် အပိုင်း (၁-၂)
by ငရဲ သား on Monday, December 3, 2012 at 8:03am ·
၂၀၁၀ ဇွန်လမှာ ၀မ်ကြားပေါင် မြန်မာပြည်လာပါတယ်..။ အဲဒီအချိန်မှာ Document ၁၅ ခုကို လက်‌မှတ်ထိုးခဲ့တယ်လို့ ဆင်ဟွာအပါအ၀င် တရုတ်ပိုင် သတင်းဌာနတွေက ရေးသားပါတယ်..။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ရေအားလျှပ်စစ် အပါအ၀င် အခြားစီမံကိန်းတွေပါ..။ လက်မှတ်ထိုးပုံက ..အထက်ပါပုံအတိုင်းပါ..။ သတင်းတွေကို လေ့လာချင်ရင် အောက်ပါလင့်တွေမှာရှိပါတယ်.။ မဟုတ်မမှန်လုပ်ကြံဝါဒဖြန့်ရေးထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ပုံကိုတော့ ဆင်ဟွာသတင်းဌာနက ယူပါတယ်...။
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း၏ နောက်ကွယ်အပိုင်း (၁)
by ငရဲ သား on Tuesday, September 11, 2012 at 4:12pm ·
လွန်ခဲ့သော(၁၉)နှစ်က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊သနပ်ပင်မြို့နယ်၊လှာပကစ်ကျေးရွာအုပ်စုရှိ မြေလွတ်မြေရိုင်းတချို့ကို ရွာသူရွာသား
တချို့က မြေယာပြုပြင်၍ လယ်မြေအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပါသည်။
မကြာမီမှာပင် အဆိုပါလယ်မြေများကို စစ်တပ်က သိမ်းယူသည်ဟုဆိုကာလယ်သမားများ လုပ်ကိုင်ခွင့် မပေးတော့ပါ။ စစ်တပ်မှ လာရောက်စိုက်ပျိုး လုပ်ကိုင်ခြင်းလည်း မရှိဘဲ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပစ်ထားခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်လာရာမှ(၂၀၁၂)ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာလတွင်မူ ယခင်ကစစ်တပ်မှ သိမ်းယူသည်ဟု ဆိုခဲ့စဉ်က ပါဝင်ခဲ့သော တပ်မတော်အရာရှိတစ်ဦး၏ သမီးဖြစ်သူက ၎င်းပိုင်မြေများဖြစ်သည်ဆိုကာ မူလလုပ်ကိုင်နေသည့် လယ်သမားများကို တရားဆွဲဆိုခဲ့ပါသည်။ တရားရုံးကလည်း လယ်မြေ ကျူးကျော်ခြေချုပ်ဖြင့် ဖမ်းချုပ်ခဲ့ပါသည်။လယ်သမား(၁၄)ဦးတွင်(၅)ဦးမှာ
သနပ်ပင်မြို့ရဲစခန်းအချုပ်တွင် အဖမ်းခံထားရပြီး၊(၉)ဦးမှာ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေကြရပါသည်။တိမ်းရှောင်နေသူများ လာရောက်အဖမ်းခံမှသာဖမ်းထားသူများကို အာမခံပေးမည်ဟုလည်း သတင်းလွှင့်ထားပါသည်။
ခြေချုပ်မှုဖြင့် ရှောင်တိမ်းနေရသူတစ်ဦးအား သွားရောက်တွေ့ဆုံအားပေးခဲ့စဉ် .... ။
ထိုသို့ မတရားပြုကျင့်ခံနေရသော လယ်သမားကြီးများဘက်မှ ရပ်တည် ကူညီပေးရန်အတွက် သနပ်ပင်မြို့သို့(၁၄၊၁၂၊၂၀၁၂)နေ့ကရောက်ရှိခဲ့ရာအဆင့်ဆင့်သော တာဝန်ရှိသူများက ကျမတို့ကို အတွေ့မခံပဲ ရှောင်တိမ်း
နေကြပြီး၊အငြိမ်းစားစစ်အရာရှိ၏သမီးဖြစ်သူသာ ရန်ကုန်မှ ချက်ချင်းရောက်လာပြီး သူ့လယ်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်လို့ဟုဆိုကာ လာရန်တွေ့ပြီး၊ သက်ဆိုင်ရာ ရဲများ၊ထောက်လှမ်းရေးများကို အကြိမ်ကြိမ်ဖုန်းဆက်၍ ကျမတို့ကို ဖမ်းခိုင်းပါသည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၂၀)က စစ်တပ်မှ သိမ်းယူသည်ဟု ဆိုခဲ့ပြီး
ယခုအခါ အငြိမ်းစားစစ်အရာရှိ၏သမီးက ၎င်းပိုင်ဆိုင်ပါသည်ဟုဆိုလာသော
ပဲခူးတိုင်း၊သနပ်ပင်မြို့နယ်၊လှာပကစ်ကျေးရွာအုပ်စုရှိ လယ်ယာမြေ .... ။
သူ့လယ်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်လို့ဟုဆိုကာ လာရန်တွေ့ပြီး၊ သက်ဆိုင်ရာ ရဲများ၊ထောက်လှမ်းရေးများကို အကြိမ်ကြိမ်ဖုန်းဆက်၍ ကျမတို့ကို ဖမ်းခိုင်းသည့် အငြိမ်းစားစစ်အရာရှိ၏သမီး .... ။
ရပ်ထားသော ကားဂွန်ဒေါင်းအား ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ဝင်တိုက်ရာ ကလေးတစ်ဦး သေဆုံး
by News of Myanmar
ဒီဇင်ဘာလ(၁၄)ရက်နေ့ ည(၉)နာရီခန့်တွင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဟင်္သာတမြို့နယ် လှည်းလမ်းတက်ကျေးရွာ ဟင်္သာတ-ဇလွန်ကားလမ်းမပေါ်တွင် လမ်းပေါ်၌ ရပ်ထားသော ကားအား နောက်မှ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ဝင်တိုက်မှု ဖြစ်ပွားရာ ဆိုင်ကယ်သည် ၈ဌ/၈၄၄၀ ကားဂွန်ဒေါင်း ယာဘက်ခြမ်းသို့ တိုက်မိပြီး အောက်သို့ ဝင်သွားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ယာဉ်တိုက်မှုတွင် ဆိုင်ကယ်ပေါ်၌ ရှေ့မှ လိုက်ပါလာသော လေးနှစ်အရွယ် ကလေးတစ်ဦး သေဆုံးပြီး ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်သူ ချမ်းမြေ့အောင် နှင့် မအေးအေးသင်း တို့နှစ်ဦး ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရရှိကာ လသားအရွယ်ကလေးငယ်မှာ ရင်ခွင်ပိုက်ထားသဖြင့် ထိခိုက်မှု မရှိကြောင်း သိရပါသည်။
ဒဏ်ရာရရှိသော ဆိုင်ကယ်စီးနင်းလာသူများသည် ဟင်္သာတနှင့် ဇလွန် အစပ်ရှိ တဂို့ ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူများဖြစ်ပြီး မိသားစု ဖြစ်ကြောင်း၊ လမ်းမပေါ်ရှိ ရပ်ထားသော ကားဂွန်ဒေါင်းတွင် အစောင့်မရှိ မီးအလင်းရောင် မပြထားဘဲ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ စစ်ဆေးရာ ဆီမရှိကြောင်း သိရသည်။
“အသုံးပြုနေတဲ့ ထော်လာဂျီတို့၊ ကားဂွန်ဒေါင်းတို့တွေက မီးမစုံတာ များတယ်။ လမ်းမပေါ်မှာလည်း စနစ်တကျ မောင်းနှင်မှု အားနည်းတယ်။ လုပ်ငန်းသုံး အမြဲသွားလာနေတော့ ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းတွေ သိဖို့နဲ့ လိုက်နာဖို့ လိုအပ်တယ်။ ယာဉ်ထိန်းအနေနဲ့လည်း စစ်ဆေး အရေးယူတာ၊ အသိပညာပေးတာ မရှိသလောက်ပါပဲ။ အခုလို လမ်းပေါ်မှာ တစ်ခုခု ဖြစ်လို့ ရပ်မယ်ဆိုရင် ညအိပ်မီး (ဘေးမီး) ဖွင့်ထားရမယ်။ အစောင့် ထားရမယ် လေ။ အခုလို ဆောင်းရာသီ အဝင်က မြူဆိုင်းတတ်တယ်။ အဝေးကို တော်ရုံမီးအားနဲ့ မမြင်ရဘူး။ အနားကပ်မှ တွေ့တာ များတယ်။ အခု ဘာမှ နားမလည်သေးတဲ့ ကလေး တစ်ယောက် သေပြီ။ လူကြီးတွေလည်း ဒဏ်ရာပြင်းတယ်။ ဘယ်သူ့ အပေါ် အပြစ်ပုံ မလဲ။ ငွေနဲ့ အစားထိုးလို့ မရတော့ဘူးလေ”ဟု သွားရောက် ကြည့်ရှုခဲ့သူက ပြောသည်။
“ကားဘက်က ကြည့်တော့လည်း ဆီကုန်လို့ ရပ်တာ ပြောမယ်။ ဆိုင်ကယ်ကလည်း သူ့ လမ်းကြောင်း အမှန် မောင်းတာပဲ။ ဘယ်သူကတော့ ငါတို့လည်း ဒဏ်ရာရ၊ ငါ့သားလည်း သေ ဆိုပြီး ဝင်တိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ကားက လမ်းပေါ်မှာ ယာဘက် ယာဉ်ကြောအပြည့် ရပ်ထားတာ။ ဖင်တောင် တင်နေသေးတယ်။ ဘယ်လိုပဲ အပြစ်တွေပုံပုံ အသက်တစ်ချောင်းကတော့ ဆုံးရှုံးသွားပြီ။ ဒါဟာ ဝမ်းနည်းစရာပဲ”ဟု ဒေသခံရွာသားတို့က ဆိုသည်။
အဆိုပါ ယာဉ်တိုက်မှုအား ဒူးယားရဲစခန်းမှ အရေးယူဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပြီး ဒဏ်ရာရသူများကို ဒူးယားတိုက်နယ် ဆေးရုံသို့ ပို့ရာ အသက် (၄) နှစ်အရွယ် ကလေး တစ်ဦး သေဆုံးပြီး ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်သူ ချမ်းမြေ့အောင်နှင့် မအေးအေးသင်း၊ လသားအရွယ် ကလေးတို့အား ဟင်္သာတခရိုင် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး သို့ လွှဲပြောင်းပို့ ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Reference and Credit to -Hinthata HumanRight
Posted By Admin Team[NOM]
မီးလောင်ဗုံး နဲ့ မီးခိုးဗုံး
Thein Win's photo.
မီးလောင်ဗုံး ကို .. စစ်သုံး အမှတ် ၃၆ လက်ပစ်ဗုံးကဲ့သို့ လက်ဖြင့် ပစ်ခတ် ရပါသည်။ မီးလောင်ဗုံးကိုယ်ထည် ကို ဘီယာသံဘူး၊ ကိုကာကိုလာ သံဘူးများ ကဲ့သို့ သံဖြူ သို့မဟုတ် အလူမီနီယံပြားဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး အရွယ်အစားမှာဘီယာသံဘူး အရွယ်ဖြစ်ပါသည်။ မီးခိုးဗုံး ကို .. M 79 ဗုံးပစ်လောင်ချာကဲ့သို့ ပစ်ရသည် ။ ---------------------------------------------------------------------------------------
ယခုတစ်လော Hot News ဖြစ်နေတဲ့ လက်ပံတောင်းတောင် အရေးအခင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့က အဓိကရုဏ်း နှိမ်နင်းရာ၌ အသုံးပြုခဲ့သည့် လက်နက်တွင် မီးလောင်ဗုံး သုံးစွဲကြောင်း သံသယများ ရှိနေပြီး အမျိုးမျိုး ဝေဖန်ပြောဆို နေကြတာကို ကြားသိ နေရပါသည်။
ထို့အပြင် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် Internet များတွင်လည်း မြင်တွေ့နေရသည့် အတွက် ယင်းပုံရိပ် အထောက်အထားများ ကိုကြည့်ပြီး ကျွန်တော့်အနေဖြင့် လေ့လာသိရှိနားလည်သော ဗဟုသုတ အပေါ် အခြေခံပြီး ကျွန်တော်၏ ထင်မြင် ယူဆချက်ကို တင်ပြ လိုပါသည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အသုံးပြုသည့် မီးခိုးဗုံးသို့မဟုတ် မျက်ရည်ယိုဗုံး ဆိုတာကို ပထမဦးစွာ ရှင်းပြချင်ပါသည်။ ထိုဗုံးကို Smoke Bomb သို့မဟုတ် Tear gas Bomb ဟု လူသိများပါသည်။ ယင်းကို ပစ်ခတ်ရာတွင် လက်ပစ်ဗုံးကဲ့သို့ လက်ဖြင့် ပစ်ခတ်၍ မရပါ။ ယင်းဗုံးကို ပစ်ခတ်သော လက်နက် တစ်လုံးထိုး ပြောင်းချော လောင်ချာသေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ရပါသည်။ ယနေ့ တပ်မတော် အသုံးပြုနေသော M.79 ဗုံးပစ် လောင်ချာနှင့် တူပါသည်။ ယင်းဗုံးကို အကွာအဝေး ကိုက် ၅ဝ မှ ၁ဝဝ အတွင်း ပစ်ခတ် နိုင်ပါသည်။ ပစ်ခတ်လိုက်သော မီးခိုးဗုံးသည် မြေပြင်ပေါ် ကျရောက်စဉ် ပေါက်ကွဲခြင်း မရှိပါ။ ထိုဗုံးမှ မီးခိုးများ အူထွက်လာပြီး ပတ်ဝန်းကျင်သို့ လေဖြင့် ပျံ့သွားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပစ်ခတ်ရာတွင် လေတိုက်ရာ အရပ်သို့ကြည့်ပြီး လေ၏ အထက်အရပ်မှ ပစ်ခတ်ရပါသည်။
ထိုမီးခိုး၏ အနံ့အသက်မှာ အလွန် ဆိုးဝါး၍ ရှူရှိုက် မိပါက အော့အန် တတ် ပါသည်။ မျက်စိထဲဝင်လျှင် စပ်ဖျင်းဖျင်းဖြစ်ပြီး မျက်ရည်ပူများ ကျတတ်ပါသည်။
ဗုံးကို တည်ဆောက် ထားပုံမှာ စစ်သုံး နှစ်လက်မ မီးခိုးဗုံးနှင့် တူပါသည်။
နောက်တစ်မျိုးကတော့ မီးလောင်ဗုံးဖြစ်ပါသည်။ ယင်းကို ပစ်ခတ်ရာတွင် အခြား လက်နက်မလိုပါ။ စစ်သုံး အမှတ် ၃၆ လက်ပစ်ဗုံးကဲ့သို့ လက်ဖြင့် ပစ်ခတ် ရပါသည်။ ဗုံးတည်ဆောက်ပုံ Mechanism မှာ အမှတ် ၃၆ လက်ပစ်ဗုံး၊ သို့မဟုတ် အမေရိကန်လုပ် လက်ပစ်ဗုံး၏ စနစ် တည်ဆောက်ပုံနှင့် လှုပ်ရှားပုံ တူပါသည်။ သို့ရာတွင် ကွဲလွဲချက်မှာ ထိုလက်ပစ်ဗုံးများ ကဲ့သို့ သံကြွပ် Castiron ဖြင့် တည်ဆောက် ပုံသွင်းထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ မီးလောင်ဗုံးကိုယ်ထည်ကို ဘီယာသံဘူး၊ ကိုကာကိုလာ သံဘူးများ ကဲ့သို့ သံဖြူ သို့မဟုတ် အလူမီနီယံပြားဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး အရွယ်အစားမှာဘီယာသံဘူး အရွယ်ဖြစ်ပါသည်။
ကွဲလွဲချက်မှာ အတွင်းတွင် အမှတ် ၃၆ လက်ပစ်ဗုံးကဲ့သို့ TNT ယမ်းပြင်း မထည့်ထားဘဲ မီးလောင်လွယ်သော မီးစုံး အဖြူ Wihte Phosphorus နှင့် ပျစ်ချွဲသော ကော်တစ်မျိုး Jelly ဂျယ်လီကို ထည့်ထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပစ်ခတ်လိုက်သောအခါ စနက်တန် Fuze ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် မီးစုံး အဖြူကို မီးကူးပြီး ပေါက်ကွဲသဖြင့် Jelly ဂျယ်လီဖြင့် ရောနှောပြီး ဘေးပတ်ဝန်း ကျင် ငါးကိုက်ခန့်ကို ထိခိုက် စေပါသည်။
မီးစုံးကြောင့် မီးလောင်ပြီး ဂျယ်လီကြောင့် ထိမှန်သော အရာဝတ္ထုပစ္စည်း၊ လူအားလုံးကို စွဲကပ်စေပြီး မီးလောင် ကျွမ်းစေပါသည်။
ဗုံးပေါက်ကွဲသည့် နေရာနှင့် အနီးအဝေးပေါ် မူတည်ပြီး လောင်ကျွမ်းမှု ပမာဏ ကွာခြားပါသည်။ ယင်းမီးလောင်ဗုံးကို 80- WP ဗုံးဟု ခေါ်ပါသည်။
လက်ပံတောင်းတောင် ကိစ္စတွင် သံဃာတော်များ အိပ်နေစဉ် ရေဖြင့်ပက်ပြီး တစ်ပြိုင်နက် မှာပဲ ယင်းမီးလောင်ဗုံးကို ပစ်ခတ်သဖြင့် လူစုလူဝေးထဲ ကျပြီး ပေါက်ကွဲသောကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာ ရရှိကြသည်ဟု ယူဆမိ ပါသည်။
သာမန်မီးခိုးဗုံးမှာ ယခုကဲ့သို့ လူကိုယ်တွင် မီးစွဲကပ်မှုမရှိနိုင်ပါ။ သံဃာတော်များမှာ သင်္ကန်းများရုံ ထားသဖြင့် သင်္ကန်းကို စွဲကပ်သောကြောင့်သာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု ပို၍ ကြီးမား နိုင်ပါကြောင်း ကျွန်တော်ဉာဏ်မီ သလောက် လေ့လာသုံးသပ်၍ တင်ပြလိုက်ပါသည်။ စုံစမ်း စစ်ဆေးရာတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲသော နေရာ၌ ရရှိနိုင်သော ပေါက်ကွဲမှု အပိုင်းအစများကို ဂရုဓမ္မ ပြု၍ လေ့လာပါက မီးလောင်ဗုံး ဟုတ်မဟုတ် ယင်းအချက်များကို အခြေခံ စဉ်းစား ဆုံးဖြတ် သင့်ပါကြောင်း အကြံပြု တင်ပြလိုက်ပါသည်။
ဒုတိုင်းမှူး၏ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မူကြောင့် အကြမ်းဖက်သူများကို ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုရန် အခက်ကြုံ
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ်တွင် ဇွန်လ အတွင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဆူပူ အကြမ်းဖက်မူအတွင်း ဖမ်းဆီး ခံထားရ သူများ
ကို အနောက်ပိုင်းတိုင်းဒုတိုင်းမှူးက အပြစ်မရှိဟု ဆိုကာ ထောက်ခံချက်များ ပေးပြီး လွှတ်ပေးရန် ဖိအားပေးနေသဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ အနေဖြင့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ် နေသည်ဟု သိရသည်။
အမည်မဖေါ်လိုသူ မောင်တောမြို့မှ ရဲအရာရှိ တစ်ဦးက ယခုကဲ့သို့ ဒုတိုင်းမှူးက စာရေး ထောက်ခံချက်ပေးပြီး တရားခံများကို လွှတ်ခိုင်းနေသဖြင့်် မောင်းတောမြို့နယ်တွင် ဖမ်းဆီးခံထားသူများ အားလုံးကို လွှတ်ပေးရမည့် အခြေအနေ ဖြစ်နေသည်ဟု ပြောသည်။
“ ကျွန်တော်တို့က အခု စိုးရိမ်လာတယ်။ နောက်ဆိုရင် ပြဿနာဟာ ရဲအရာရှိတွေရဲ့ ခေါင်းတွေပေါ် ပုံကျလာနိုင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ကို ဖိအားပေးလာတာတွေများလာတယ်။
ဒါကြောင့် အမူတွေကို မစစ်ဆေးဘဲ အားလုံးကို လွှတ်ပေးရမလို ဖြစ်နေပါတယ်” ဟု သူက ဆိုသည်။
မောင်တောမြို့နယ် အတွင်း ဇွန်လ အတွင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဆူပူ အကြမ်းဖက်မူတွင် ပါဝင်သူဟု သင်္ကာမကင်းသူ ဘင်္ဂလီ လူမျိုး ၆၀၀ ကျော်ကို ဖမ်းဆီးပြီး စစ်ဆေးနေကြောင်း သူက ပြောသည်။
အနောက်ပိုင်း တိုင်းမှူး၏ ထောက်ခံချက်ထဲတွင် မည်သူသည် အပြစ်မရှိကြောင်း၊ မည်သူက အရေးအခင်းတွင် ဘာမှ ပတ်သက်မူ မရှိကြောင်း ပြောဆိုပြီး ထောက်ခံချက်ပေးကာ လွှတ်ပေးရန် ရဲအဖွဲ့အား ဖိအားပေး တောင်းဆိုနေသည်ဟု ဆိုသည်။
“ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ မိသားစု ဆွေမျိုးတွေက စစ်တပ်ကို ချဉ်းကပ်တော့ သူတို့က အခုလို ထောက်ခံချက် ပေးပြီး လွှတ်ခိုင်းနေတာ။ နောက်ကွယ်က ဘယ်အကြောင်းအရာတွေ ရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်တို့လည်း မသိဘူး” ဟု ဆိုသည်။
ယခုကဲ့သို့ အနောက်ပိုင်းတိုင်း ဒုတိုင်းမှူး အပေါ် စွပ်စွဲ ပြောကြားချက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး နိရဉ္စရာက သီးခြား အတည်ပြုချက် ရယူနိုင်ခြင်း မရှိပါ။
သို့သော်လည်း ချမ်းသာသော မွတ်ဆလင် မိသားစု တချို့သည် သူတို့၏ ဆွေမျိုးတော်စပ်သူများ ဖမ်းဆီးခံနေရရာမှ လွှတ်မြောက်ရန် အတွက် စစ်တပ် အရာရှိများကို နည်းမျိုးစုံဖြင့် ချဉ်းကပ် ကြိုးစား နေကြောင်း ခိုင်လုံသော သတင်းရပ်ကွက်အရ သိရသည်။
ထိုသို့ လွှတ်မြောက်ရာတွင် ကျပ်ငွေ သိန်း ရာဂဏန်းထိ ပေးကမ်း အသုံးပြုနေသူများလည်း ရှိသည်ဟု အဆိုပါ သတင်း ရပ်ကွက်က ပြောသည်။
Globallinn Linn's photo.
ခင်ဗျားတို့မှတ်မိလားတော့မသိဘူး ဒီအကြောင်းအရာလေးကို တရုတ်နိုင်ငံ အဝေးပြေးလမ်းပေါ်က မဖယ်ပေးပဲ တင်းခံနေတဲ့ အိမ်လေးအကြောင်းပေါ့ အခုဟာကတော့ Update သတင်း လေးပါ အဲ့အိမ်ပိုင်အရှင်အဘိုးအိုက အခုတော့ ဖျက်ပေးဖို့ သဘောတူလိုက်ပါပြီတဲ့ .... ဒေါ်လာ 42000 နဲ့ ပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့သဘောတူလိုက်ပါပြီ အခုတော့ ဒီအဘိုးမိသားစုလေးဟာ အနာဂတ်အတွက် ဒေါ်လာ 42000ကို ပိုက်ပြီး ထွက်ခွာသွားလေရဲ့ :) ....
တပည့်တော်တို့သည် မိုက်မဲသည့်အလျောက်ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်မိပါသည်
ဓာတ်ပုံ - မောင်တာ
နိုင်ငံတော်အစိုးရက ယနေ့မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် မဟာအတုလဝေယံ(အတုမရှိ)ကျောင်းတော်ကြီး၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ၀န်ချတောင်းပန်သော အခမ်းအနားမှာ ညနေ ၄ နာရီတွင် ပြီးဆုံးခဲ့ပြီး အစိုးရ၏တောင်းပန်မှုကို သံဃာအများစုက ကျေနပ်လက်ခံခဲ့ကြသည်။ အခမ်းအနားတွင် မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက် ဒုတိယနာယကချုပ် ဆရာတော်က ငါးပါးသီလချီးမြှင့်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့က သံဃာတော်များကိုတောင်းပန်သော တောင်းပန်ချိုးကို ဆရာတော်ဝီရသူက တိုင်ပေးကာ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များက လိုက်ဆိုကြသည်။ ကန်တော့ချိုးမှာ "အရှင်ဘုရား တပည့်တော်တို့သည် မိုက်မဲသည့်အလျောက်၊ တွေဝေသည့်အလျောက်၊ မလိမ္မာသည့်အလျောက် သံဃာတော်ကို အစိုးမရခြင်းတည်းဟူသော အကြောင်းကြောင့် ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်မိပါသည်။ အရှင်ဘုရား ထိုတပည့်တော်တိုးအား သံဃာတော်သည် နောင်အခါ စောင့်စည်းခြင်းငှာ အပြစ်ကို အပြစ်အားဖြင့် ရှုမြင်၍ ကရုဏာရှေ့ထား မေတ္တာအားဖြင့် ခွင့်လွှတ်တော်မူပါဘုရား" ဟု၍ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုယ်စား သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးလှထွန်းက သံဃာတော်များကို တောင်းပန်ကြောင်း ထပ်မံလျှောက်ထားခဲ့သည်။ ထို့နောက် မုံရွာမြို့မှ ဇောတိကရာမကျောင်းထိုင်ဆရာတော်၊ မြို့မဂါတ်ကျောင်းဆရာတော်၊ ဂဠုန်နီဆရာတော်ဦးက၀ိရတို့က သြ၀ါဒစကားမိန့်ကြားခဲ့သည်။
ဂဠုန်နီဆရာတော်ဦးက၀ိရက အစိုးရအဖွဲ့၏ တောင်းပန်မှုကို သံဃာတော်များအနေဖြင့် ကျေနပ်ပါက သာဓုခေါ်ရန် မိန့်ကြားသောအခါ အခမ်းအနားတက်ရောက်လာသော သံဃာအားလုံးက သာဓုခေါ်ကြသည်။ အစိုးရအဖွဲ့၏ တောင်းပန်မှုကို သံဃာတော်များက ကျေနပ်ပြီဖြစ်သည့်အတွက် သံဃာတော်များက ဆန္ဒပြမှုများ ပြုလုပ်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်း ဂဠုန်နီဆရာတော်ဦးက၀ိရက 7Day News သို့ မိန့်ကြားသည်။ ထိုအခမ်းအနားတွင် ဒဏ်ရာပြင်းထန်သော သံဃာလေးပါးကို နိုင်ငံခြားသို့ ပို့ဆောင်၍ ဆေးဝါးကုသမှုပေးရန် ဂဠုန်နီဆရာတော်ဦးက၀ိရက မိန့်ကြားရာ၌ ၀န်ကြီးဦးလှထွန်းက အဆိုပါသံဃာလေးပါးကို ရန်ကုန်မြို့သို့ ပို့ဆောင်ကာ ဆေးဝါးကုသမှုပေးမည်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်ပါက နိုင်ငံခြားသို့ ပို့ဆောင်ကုသပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်လျှောက်ထားခဲ့သည်။
မန္တလေး ဒီဇင်ဘာ ၁၅
ယနေ့ နေ့လည် ၂ နာရီခွဲ တွင် မန္တလေး အတုမရှိကျောင်း၌ သမ္မတရုံးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးလှထွန်း နှင့် ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေသက်ခင် တို့ ဦးဆောင်၍ လက်ပံတောင်းတောင်သပိတ်ဖြိုခွဲရာမှာဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သော သံဃာတော်များအား ဝန်ချတောင်ပန်ခဲ့ကြောင်း CJ Myanmar ကသိရှိရသည်။ အဆိုပါဝန်ချတောင်းပန်ပွဲသို့ ရဲချုပ်ကျော်ကျော်ထွန်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးသာအေး နှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးအချို့ တက်ရောက်ကြောင်းသိရှိရသည်။
Photo by- Popular Myanmar News
ဓမ္မစက်ဖြင့် ပြီးလျှင် အာဏာစက်ဖြင့် ပြုလုပ်ရန် အသံေ...
ရပ်ထားသော ကားဂွန်ဒေါင်းအား ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ဝင်တိုက်ရ...
ဒုတိုင်းမှူး၏ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မူကြောင့် အကြမ်းဖက်သူ...